लसुन, चुकन्दर र खरबुजाले साँच्चै रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
लसुन, चुकन्दर र खरबुजाले साँच्चै रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : २५ पुष २०७८ १८:३६
चुकन्दर, लसुन र खरबुजा खाँदा रक्तचाप नियन्त्रणमा रहन्छ ? धेरैले यसले नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्छन् तर यसमा वास्तविकता छ त ? ब्रिटेनका डाक्टर क्रिस वान टुल्लेकेनले यो दाबीमाथि अनुसन्धान गरेका छन् र यसको वास्तविकताबारे जानकारी दिएका छन् ।
मुटुका रोगीका लागि उच्च रक्तचाप एउटा निकै ठूलो खतरा हो । बेलायतमा यो रोगबाट सबैभन्दा धेरैको मृत्यु हुन्छ ।
यदि यी तीनै चिजको विषयमा गरिएको दाबी सही हो भने यी खाद्य पदार्थ असाध्यै ठूला ‘जीवन रक्षक’ साबित हुनसक्छन् ।
किङ्ग्स कलेज लण्डनका डा. एन्डी वेब पनि यी खाद्य पदार्थको विषयमा गरिएको दाबीको वास्तविकता परीक्षण गर्नका लागि एउटा ठूलो स्तरमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा यी सबैको असर कस्तो हुन्छ भनेर उनले बुझ्ने कोसिस गरे ।
कसरी गरियो यो प्रयोग ?
यो प्रयोगमा रक्तचापको समस्यासँग जुधिरहेका २८ स्वयंसेवकलाई छानियो । यी सबैको अधिकतम रक्तचाप १३० एमएमभन्दा बढी थियो जबकी कुनै वयस्क व्यक्तिमा यो १२० हुनुपर्छ । यी सबैलाई तीन समूहमा बाँडियो ।
पहिलो हप्ता समूह १ का व्यक्तिलाई हरेक दिन लसुनका दुईवटा दाना खाना दिइयो । समूह २ लाई खरबुजाका दुई ठूला टुक्रा दैनिक खुवाइयो । यस्तै समूह ३ का हरेक सदस्यलाई प्रतिदिन दुईवटा चुकन्दर खान दिइयो ।
दोस्रो र तेस्रो हप्तामा हरेक समूहलाई खुवाइने चिजलाई एक–अर्कासँग फेरियो । यसरी तीन हप्ताका बेला हरेक समूहका सबै सदस्यले तीनैवटा चिज खाए ।
लसुन, चुकन्दर र खरबुजामा यस्तो के खास छ ?
हामी मिडियामा चल्ने शब्द ‘सुपरफुड्स’ लाई महत्व दिँदैनौँ तर खानपिनका थुप्रै चिजले हाम्रो शरीरमा निकै राम्रो प्रभाव पार्ने कुरा भने साँचो हो ।
त्यसैले हामीले यी तीनै चिजको परीक्षण गर्यौँ जसले रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा खानपिनका यी तीनै चिजले हाम्रो रक्तचापलाई कम गर्छ ।
यी खानेकुरा खाँदा हाम्रो रगतको नली चौडा हुन्छ जसका कारण हाम्रो रगत निकै सजिलै बग्न सक्छ । तर यी तीनै चिजको असर एकै खालका हुँदैनन् ।
परीक्षणको नतिजा कस्तो रह्यो ?
हरेक सहभागीको रक्तचापलाई दिनमा दुई पटक बिहान र बेलुका मापन गरियो । हरेक पटक तीनवटा आँकडा लिइयो र त्यसको औसत निकालियो । त्यसपछि यी तीनै खाद्य पदार्थको प्रभाव जान्न सम्भव हुनसक्यो । यी आँकडाबाट थाहा हुन्छ कि आखिर कुन खाद्य पदार्थको सबैभन्दा बढी असर भइरहेको छ ।
यो प्रयोगका बेला समूहका सबै सदस्य जब सामान्य जीवन बाँचिरहेका थिए उनीहरुको औसत रक्तचाप १३३.६ एमएम पाइयो । चुकन्दर खाने समूहका औसत रक्तचाप १२८.७ एमएम पाइयो जबकी लसुन खानेहरुको १२९.३ एमएम । यो छोटो समूहमा गरिएको प्रयोगको आँकडा डा. वेब र अन्यद्वारा गरिएको ठूला अध्ययनको नतिजासँग मेल खाइरहेका छन् ।
उच्च रक्तचाप र मुटुको रोगका बीच सम्बन्धमा गरिएको यी अध्ययनबाट थाहा भएको थियो कि उच्च रक्तचापमा भएको यो गिरावट यदि यस्तै भइरहे स्ट्रोक र हृदयघातको खतरा १० प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ ।
खरबुजाको खासै ठूलो प्रभाव देखिएन । यसको रक्तचापको अधिकतम सीमा केवल १२९.८ एमएमसम्म मात्रै पाइयो । यस्तो सायद यसकारण कि खरबुजामा धेरैजसो पानी मात्रै हुन्छ र यसमा सक्रिय तत्वको कमी हुने गर्छ ।
प्रयोगबाट हामीले के पायौँ ?
हाम्रो यो सानो अध्ययनले के बताउँछ भने नियमित रुपमा चुकन्दर र लसुन खाँदा हाम्रो रक्तचाप घट्न मद्दत हुन सक्छ । तर यस्तो यी दुई चिज खाँदा मात्रै हुने होइन ।
चुकन्दरमा मुख्य रुपमा जुन नाइट्रेन पाइन्छ, त्यो उदाहरणका लागि विभिन्न हरिया सागसब्जी जस्तै ज्वानो, बन्दागोभी, पालुङ्गो, ब्रोकली आदिमा पाइन्छ ।
यस्तै, लसुनमा मुख्य रुपमा एलिसिन हुन्छ, जुन प्याज र तीजस्तै अन्य प्रजातिमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।
यो परीक्षणबाट हामीलाई थाहा भएको छ कि यस्तो थुप्रै चिज छन् जसले हाम्रो रक्तचापलाई कम राख्न मद्दत गर्न सक्छ । तर यसको असर कति प्रभावकारी हुनेछ, त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ, त्यसमा निर्भर हुनेछ ।
तरकारी र सागमा हुने नाइट्रेटलाई कसरी जोगाउने ?
– सलाद र तरकारी काँचै खानुहोस् । तरकारीमा पाइने नाइट्रेट त्यतिबेला सुरक्षित पाइन्छ जब ती पकाइँदैन । जब ती पकाइन्छ वा भुटिन्छ तब नाइट्रेटको मात्रा कम हुन्छ ।
– नाइट्रेट पानीमा घोलिन्छ । त्यसैले जब हामी यी तरकारी र सागलाई उमाल्छौं तब त्यसमा भएका केही नाइट्रेट पानीमा घोलिन्छ । यसको अचार बनाउँदा पनि नाइट्रेट बर्बाद हुन्छन् ।
– यदि तपाईं चुकन्दर उमाल्नुहुन्छ भने त्यसलाई उसकै स्वरुपमा उमाल्नुहोस् । यदि उमाल्नु अघि त्यसको माथिल्लो वा तल्लो भाग काट्नुहुन्छ भने गलत हुनेछ ।
– चुकन्दरको रस पिउनुहोस्, त्यसको रसमा अधिकांश नाइट्रेट सुरक्षित हुन्छ ।
– सुप बनाएर खानुहोस् । पानीमा घोलिने नाइट्रेट घोलिएर पनि सुपमा नै हुन्छ । त्यसैले सुप पिउनु ठिक हुन्छ ।
– तरकारी र सागलाई उमाल्नुभन्दा त्यसलाई बाफमा पकाएर खानुहोस् । यदि उमाल्नु नै ठिक लाग्छ भने कम पानीमा उमाल्नुहोस् । उमालेपछि बाँकी भएको पानीको प्रयोग सुप वा अन्य चिज बनाउन प्रयोग गर्नुहोस् ।
लसुनको प्रयोग कसरी गर्ने ?
– लसुनलाई जति सम्भव छ त्यति पिस्नुहोस्, त्यसलाई जति सक्दो मसिनो गरी काट्नुहोस् । तपाईं त्यसलाई जति राम्रोसँग पिस्नुहुन्छ वा काट्नुहुनछ त्यसबाट त्यति नै धेरै एलिसिन निस्कनेछ ।
– पिसेपछि वा काटेपछि लसुनलाई जति छिटो उपयोगमा ल्याउनुहोस् । सुप वा खानका लागि तयार गरिएको तरकारीमाथि हालेर यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । टोस्ट वा च्याउजस्ता खानेकुरामा पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
– तपाईंले ताजा लसुनलाई पिस्ने वा काट्ने बित्तिकै त्यसमा भएको एलिसिन तीब्र रुपमा खराब हुन थाल्छ ।
–माइक्रोवेबमा लसुन नराख्नुहोस् । आँचमा एलिसिन निकै तीब्र रुपमा खराब हुन्छ तर माइक्रोवेवमा त यो पूरै बर्बाद नै हुन्छ ।
चेतावनी : लसुनको असाध्यै धेरै प्रयोग पनि स्वास्थ्यका लागि ठिक होइन । अत्यधिक लसुनको सेवनले जलन र पाचन खराब हुनसक्छ ।
जीवनशैली फेरिँदा पनि कम हुन्छ उच्च रक्तचापः
थुप्रै मानिस आफ्नो जीवनशैली फेरेर केही हप्तामा नै आफ्नो उच्च रक्तचाप घटाउन सफल भएका छन् । यसका बिरामीले यी निम्न कुरा गर्नुपर्छः
– शारीरिक रुपमा सक्रिय
– स्वस्थकर खानपिन । काम बोसो भएका खाना, खानामा सबै तत्वको सन्तुलन होस्, पर्याप्त हरियो साग र तरकारी खानुहोस्
– रक्सी र धुम्रपानबाट टाढा नै बस्नुहोस्
– तौललाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्
– दैनिक ६ ग्रामभन्दा बढी नुन नखानुहोस्
– कफी, चिया वा चिसो पेयर पदार्थ निकै कम सेवन गर्नुहोस् । दिनमा चार कपभन्दा बढी कफी पिउँदा रक्तचाप बढ्ने खतरा हुन्छ ।
रातोपाटी बाट सभार